राहत - एक राहत ... पढ्नुहोस्। जियोलोजिकल संरचना र राहत
को भूगोल र स्थान वर्णन अध्ययन गरेर, हामी यस्तो भू-भाग रूपमा एक शब्द संग सामना गर्दै छन्। यो अवधि कस्तो छ र यसको लागि प्रयोग के हो? हामी शब्द को अर्थ सामना यस लेखमा हामी प्रकार र के सिक्न राहत को प्रकारका, र अझ थप।
राहत को धारणा
त्यसैले, यो अवधि कस्तो अर्थ राख्छ? राहत - अप प्राथमिक प्रकारका छन् जो ग्रह को सतह अनियमितताहरु, एक सेट। यसको मूल, इतिहास, विकास, गतिशीलता र आन्तरिक संरचना अध्ययन गर्ने एउटा छुट्टै विज्ञान पनि छ। त्यो geomorphology भनिन्छ। छुटकारा अलग प्रकारका, कि छ, प्राकृतिक शरीर को, यो को भागहरु प्रतिनिधित्व हुन्छन् र आफ्नो आकार छ।
प्रकारका एक किसिम
morphological वर्गीकरण सिद्धान्त अनुसार, प्राकृतिक प्राकृतिक शरीर सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन सक्छ। तिनीहरूलाई को पहिलो एक उठाने सतह प्रदान, बादल मडारिरहेको माथि rises। एउटा उदाहरण, एक hillock, पहाडी, पठार, पहाडी, आदि रूपमा .. दोस्रो, क्रमशः, बादल मडारिरहेको एउटा स्लाइड नातेदार गठन। यो उपत्यका बीम, अवसाद, ravines, आदि माथि उल्लेख रूपमा हुन सक्छ, छुटकारा फारम अलग तत्व हुन्छन्: .. सतहहरु (अनुहारहरू), अंक, रेखा (किनाराको) कोण। कठिनाई डिग्री सरल र जटिल प्राकृतिक प्राकृतिक शरीर भेद। द्वारा सरल प्रकारका धक्का, hollows र hollows टी समावेश गर्नुहोस्। डी तिनीहरूले आकार गठन गर्ने संयोजन गर्ने छुट्टै morphological तत्व हो। एउटा उदाहरण, एक hillock रूपमा। खुट्टा, ढलान, शीर्ष: यो यस्तो भागमा विभाजन गरिएको छ। यो जटिल आकार सरल एक श्रृंखला हुन्छन्। उदाहरणका लागि, बेसी। यो बुझ्न, ढलान र यति मा, ट्र्याकको समावेश छ।
डिग्री ढलान गरेर भेद subhorizontal सतह (20 भन्दा कम डिग्री), र इच्छुक ढलान (20 भन्दा बढी डिग्री)। सीधा, convex, concave वा कदम - तिनीहरूले विभिन्न आकारहरू हुन सक्छ। खण्डका को डिग्री अनुसार मा खुला विभाजित र बन्द गर्न सकिन्छ।
राहत को प्रकार
यस्तै मूल अधिकार र एक निश्चित स्थान मा विस्तार जो प्राथमिक प्रकारका, को संयोजन भू-भाग को प्रकार सेट गर्छ। ग्रह को ठूलो क्षेत्रमा यस्तै मूल वा मतभेद आधारमा धेरै भिन्न प्रजाति संयोजन गर्न सम्भव छ। यस्तो अवस्थामा, राहत समूह प्रकार बारेमा कुरा गर्न। सहमतिलाई आफ्नो शिक्षा को आधार मा बनेको छ, हामी प्राथमिक प्रकारका आनुवंशिक प्रकार को कुरा। भूमि राहत को सबै भन्दा साधारण प्रकार - एक सादा र पहाड। उचाइ पहिलो निराशा, पहाड, lowlands, Highlands र plateaus भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। दोस्रो छुट्टयाएर बीचमा उच्चतम, उच्च, मध्यम र कम।
यो क्षेत्र, साना (अप गर्न 200 मीटर) द्वारा विशेषता छ जो नातेदार elevations, साथै एक अपेक्षाकृत सानो ढलान ramps (अप5डिग्री गर्न)। निरपेक्ष उचाइ (500 मीटर सम्म) सानो छ। पृथ्वी सतह यी क्षेत्रहरु (भूमि, समुद्र र महासागर तल), ऊंचाई आधारमा lowland (अप गर्न 200 मीटर) हो, उचाइ (200-500 मीटर), upland वा उच्च (500 भन्दा बढी मीटर)। राहत प्लेनस् मुख्यतया ruggedness र भूमि आवरण को डिग्री मा निर्भर गर्दछ। यो loamy, माटो, पीट, बलौटे soils हुन सक्छ। तिनीहरू कटौती गर्न सकिन्छ riverbeds, ravines र gullies।
यस क्षेत्रमा 500 मिटर, 200 मिटर सापेक्षिक elevations र ढलान5डिग्री भन्दा कुनै थप गर्न उँचाइमा संग undulating पृथ्वीको सतह गठन अनियमितताहरु भएको। पहाडलाई अक्सर दृढ काठ र ढलान र छाडा रक को एक मोटी पत्र ढाकिएको शीर्ष बनेको छन्। Depressions, फ्लैट व्यापक वा खोक्रो बन्द छन् therebetween।
पहाडी भू-भाग - यो भू-भाग ग्रह सतहमा प्रतिनिधित्व छ, एकदम वरपरको क्षेत्र सापेक्षित उच्च छ। यो 500 मिटर निरपेक्ष हाइट्स द्वारा विशेषता छ। यो क्षेत्र एक वैविध्यपूर्ण र कठिन भू-भाग, साथै विशिष्ट प्राकृतिक र मौसम अवस्था छ। मुख्य प्रकारका अक्सर Bluffs भीर र र घाटीहरू र ridges बीच स्थित ravines परिणत जो विशेषता ठाडो ढलान, संग पहाड दायरा छन्। पृथ्वी सतह को पहाड क्षेत्रमा एकदम सागर को स्तर माथि उठाएको छ, र तिनीहरूले वरपरका फाँटमा माथि rises जो एक साधारण आधार, छ। तिनीहरूले राहत को नकारात्मक र सकारात्मक प्रकारका एक नम्बर समावेश। आफ्नो उचाइ को स्तर अनुसार कम पहाड (अप 800 मीटर), मध्य पहाड (800-2000 मिटर) र उच्च ऊंचाई (2,000 मीटर) मा विभाजित गर्न सकिन्छ।
पृथ्वीको सतह को उमेर प्राथमिक प्रकारका नातेदार र निरपेक्ष छ। पहिलो कुनै पनि अन्य सतह (ढिलो होस् वा पछि) आदर एक राहत को गठन स्थापित गरिएको छ। दोस्रो प्रयोग निर्धारण गरिन्छ जियोलोजिकल समय मापन। छुटकारा द्वारा endogenous र exogenous सेना बीच निरन्तर अन्तरक्रिया गठन गरिएको छ। यसरी, प्राथमिक फारामहरू र exogenous को मुख्य विशेषताहरु को गठन को लागि जिम्मेवार endogenous प्रक्रियाहरु, त्यसको विपरीत, तिनीहरूलाई पंक्तिबद्ध खोज्छन्। यो ब्रह्माण्ड को प्रभाव भूल छैन, पृथ्वी र सूर्य को ऊर्जा को मुख्य स्रोतहरु राहत-छन्। पृथ्वीको सतह को गठन गुरुत्वाकर्षण को प्रभाव अन्तर्गत हुन्छ। endogenous प्रक्रियाहरू को मुख्य स्रोत संग सम्बन्धित छ जो ग्रह, को तापीय ऊर्जा सकिन्छ रेडियोधर्मी क्षय यसको मेन्टल मा निरन्तर। यसरी, कन्टिनेन्टल र Oceanic यी शक्तिहरू को प्रभाव अन्तर्गत गठन भएको थियो को पाप्रो। Endogenous प्रक्रियाहरू गल्तीलाई, Folds, को lithosphere, volcanism र भूकम्प को आन्दोलन को गठन हुन।
अध्ययन ग्रह को सतह, वैज्ञानिकहरू geomorphology मा संलग्न छन् खेल्छ। आफ्नो मुख्य कार्य - व्यक्तिगत देशहरूको, महादेशमा, ग्रह को भू र स्थान वर्णन अध्ययन गर्न। एक विशेष क्षेत्र पर्यवेक्षक को विनिर्देशों अप चित्रकला यसलाई अगाडि कारण के यसको मूल बुझ्न, सतह फारम निर्धारण हुनुपर्छ मा। निस्सन्देह, जवान Geographer यी विषयमा आफ्नै बाहिर आंकडा गाह्रो हुनेछ, त्यसैले यो पुस्तक वा शिक्षकहरूको मद्दत खोज्न सबै भन्दा राम्रो छ। राहत विवरण लेखा, geomorphology टोली अध्ययन क्षेत्र पार गर्नुपर्छ। तपाईं केवल नक्शा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो पट्टी सम्भव अनुगमन विस्तार गर्न आवश्यक छ। र अनुसन्धान प्रक्रियामा समय समयमा गर्न पक्ष मुख्य सडक बाट टाढा सार्न। यो foreseeable खराब भू-भाग, जंगल वा पहाड समीक्षा हस्तक्षेप जहाँ लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
सामान्य जानकारी लेखन (.. भू-भाग, पहाडी पहाडी, बीहड, आदि छ), यो नक्शा छुट्टाछुट्टै छुटकारा प्रत्येक तत्व वर्णन गर्न पनि आवश्यक छ - .. ठाडो ढलान gully भ्क्याल नदी उपत्यका, आदि को आयाम निर्धारण गर्न - गहिराई, चौडाई, उचाई, कोण - अक्सर गर्न, तिनीहरूले भन्न रूपमा, आँखा छ। छुटकारा क्षेत्र को भूवैज्ञानिक संरचना निर्भर छ भन्ने तथ्यलाई गर्न, अवलोकन बाहिर थिए कारण, यो आवश्यक छ कि अध्ययन अन्तर्गत सतह माथि बनाउन रक्स को र भौगर्भिक संरचना र संरचना वर्णन गर्न केवल आफ्नो उपस्थिति छ, र। यसलाई विस्तार पालन गर्न आवश्यक छ sinkholes, विवरण साथै पहिरो, गुफा र यति मा। एन, यो बाहिर गर्नुपर्छ र अध्ययन क्षेत्रको योजनाबद्ध रेखाचित्र।
यो सिद्धान्त अनुसार, तपाईंले आफ्नो घर नजिकै स्थित छ जो क्षेत्र, अन्वेषण गर्न, र तपाईंले महादेशमा को राहत वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। एक प्रविधी, केवल मात्रा फरक छ, र महाद्वीप को विस्तृत परीक्षा को लागि समय धेरै लामो हुनेछ। उदाहरणका लागि, वर्णन गर्न दक्षिण अमेरिका को राहत, को अनुसन्धान समूह को एक नम्बर बनाउन, र त्यसपछि पनि यसलाई थप एक वर्ष भन्दा हुनेछ आवश्यकता। सबै पछि, मुख्य भूमि, पहाड को एउटा प्रशस्त द्वारा विशेषता छ सम्पूर्ण महादेशमा, को अमेजन कुमारी वन, अर्जेण्टीनी pampas, र यति मा। ई, कुन थप कठिनाइ सिर्जना साथ stretching बताए।
जवान भू-morphologist नोट
क्षेत्र एक राहत नक्सा बनाउने, यो जहाँ तपाईं उत्पादन ठाउँ चट्टान तहहरू र भूमिगत पालन गर्न सक्छन् स्थानीय सोध्न सिफारिस गरिएको छ। यी डाटा सर्किट क्षेत्र ल्याउन र विस्तार र स्केच तिनीहरूलाई वर्णन गर्न आवश्यक छन्। रक फाँटमा मा अक्सर जहाँ नदी वा gullies सतह मार्फत कटौती र तटीय भीर गठन क्षेत्रमा उजागर। साथै, यी तहहरू को QUARRIES वा जहाँ देख्न सकिन्छ राजमार्ग वा hewn recess संग रेलवे रन। युवा geologist जाँच्न र रक प्रत्येक तह वर्णन गर्नेछ, यो तलबाट सुरु गर्न आवश्यक छ। एक टेप उपाय प्रयोग गर्दा, तपाईं पनि क्षेत्र पुस्तकमा लिपिबद्ध हुनुपर्छ जो इच्छित माप बनाउन सक्नुहुन्छ। विवरण आकार र संख्या र सही स्थान प्रत्येक तह को विशेषताहरु संकेत गर्नेछ।
खाद्य मशरूम: नाम र फोटो
पत्तेदार mosses: प्रतिनिधिहरु, विशेष गरी संरचना र संगठन
व्यवहार कस्तो छ? जनावर र मानिसहरूलाई व्यवहारलाई
Reservoirs - यो के हो? पानी को शरीर र आफ्नो बासिन्दाहरूले को प्रकार
सरीसृप - यो ... amphibians र सरीसृप। पुरातन सरीसृप
प्राथमिक विद्यालयमा अनुसन्धान कार्य। छोराछोरीको अनुसन्धान
होटल अल Bustan को होटल4* (संयुक्त अरब एमिरेट्स / शारजाह): फोटो र समीक्षा
डिस्लेक्सिया के हो? लक्षण र उपचार: मा बच्चाहरु डिस्लेक्सिया
ताल को वातावरण: एक सामान्य विवरण
इस्टर लागि मिठाई को Bouquets - ध्यान एक राम्रो साइन
एक पत्नी कसरी चयन गर्ने? सही पत्नी कस्तो हुनुपर्छ
"प्रावधान" शैलीमा लवली कुरा। आफ्नै हातले घडीहरू घटाउँदछ
वर्तमान सही काल - रूसी धारणा लागि सबैभन्दा कठिन समयमा एक
तयारी "Vazario एच 160": प्रयोग, वर्णन, मूल्यांकन र संरचना लागि निर्देशन
मुखासे लागि Peels। कस्मेटिक्स मा peelings को प्रकार। अनुहार सफाई
रेस्टुरेन्ट "Rubaiyat" कजान: ठेगाना, फोटो र समीक्षा
Nomadic पक्षी: तिनीहरू को हुन्? चराहरू न्यानो ठाउँहरूमा उड्ने
हवाई शर्ट - लोकप्रियता बिना सीमाना